88 visiteurs - 346 pages vues
177203 visiteurs - 614475 pages vues
Tabataba ny maro kilonga, Fa asakasakareo tsy mba tonga.
Setrasetra no fomban'ny lambo;
Fa ny hanina anao tsy mba tambo!
Jononoka ny erika an'ala,
Patrapatraka ilay patrakala,
Fenofeno ny lavi-malala.
Dinidinika sisa lazaina,
Hafatrafatra anao sombinaina:
Hontsahontsa fa mani-maraina.